Hormuud Foundation iyo Salaam Bank oo deeq gaarsiisay Xabsiga Dhexe iyo Isbitaal Martiini - Jowhar Somali Leader
Home Somali Hormuud Foundation iyo Salaam Bank oo deeq gaarsiisay Xabsiga Dhexe iyo Isbitaal...
Hormuud Foundation iyo Salama Bank ayaa deeq gaarsiiyay xarunta xabsiga dhexe ee Muqdisho, kaasoo loogu talagalay maxabiista xabsiga ku jirta in ay fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan uga faa’ideystaan.
Deeqdan oo isugu jirta Bur Bariis, baasto, Sokor, Saliid, Caleen shaah, Cabitaan, Timid iyo 5-Neef oo Geel ah, waxaa kaloo Hormuud ay maxaabiista siisay dhar ay ugu tala gashay inay ku ciidaan maalin Ciida.
Cabdullaahi Nuur Cismaan Guddoomiyaha hormud Foundation ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda maanta ay gaarsiiyeen xabsiga dhexe ee xamar.
Dhanka kale Hay’adda Hormuud Fondation ayaa ciidamada naafada ah xooga dalka Soomaaliyeed gudoonsiisay deeq isugu jirta Lacag cash ah iyo Timir, waxaana Gudoomiyaha hormuud foundation cabdullaahi Nuur cismaan uu sheegay in deeqda ay kakoobantahay 5.000 (shan kun oo doolarka mareekanka) ah iyo 50 kartoon oo timir ah.
Waxaa deeqdaasi u guddoomay Ciidamada Naafada ah ee ku jira Isbitaalka Martiini afhayeenka Ciidamada naafada oo hay’ada hormuud foundation kaga mahad celiyay taageerada ay lagarab taaganyihiin dadka danta yar mar walba.
Deeq ka timid Hormuud iyo Salama Bank